XCMG फैक्टरी बाट GR215 मोटर ग्रेडर को मूल्य
विवरण:XCMG GR215 मोटर ग्रेडर,XCMG GR215 ,GR215 मोटर ग्रेडर,XCMG 210HP ग्रेडर,,
HONG KONG KAIDE MACHINERY LIMITED XCMG GR215 मोटर ग्रेडर,XCMG GR215 ,GR215 मोटर ग्रेडर,XCMG 210HP ग्रेडर,,
घर > उत्पादनहरू > XCMG मोटर ग्रेडर > XCMG GR215 मोटर ग्रेडर
XCMG GR215 मोटर ग्रेडर को उत्पाद कोटिहरु, हामी चीन, XCMG GR215 मोटर ग्रेडर , XCMG GR215 आपूर्तिकर्ताओं / कारखाना, GR215 मोटर ग्रेडर आर एन्ड डी को थोक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु र विनिर्माण देखि विशेषज्ञता प्राप्त गर्दै छन्, हामी एकदम सही पछि बिक्री सेवा र प्रौद्योगिकी समर्थन छ। तपाईंको सहयोगको लागि अगाडि हेर्नुहोस्!
XCMG मोटर ग्रेडर GR215 / GR215A नयाँ शर्त GR215 बिक्रीको लागि मोटर ग्रेडर हट बेच्नुहोस् २१०HP GR215 मोटर ग्रेडर पार्ट्सको साथ बिक्रीको लागि ठूलो क्याब उच्च प्रदर्शन ड्यासबोर्ड levels स्तरहरू खतरनाक मोनिशन प्रणालीको...
CHINESE 210HP / 220HP मोटर ग्रेडर XCMG GR215
२०१ NEW नयाँ GR215 मोटर ग्रेडर फर्मल्यान्ड
XCMG औपचारिक डीलर GR215 / 215A मोटर ग्रेडर
GR215 215Hp आधिकारिक मोटर ग्रेडर बिक्रीको लागि
मोडेल संख्या : GR215
GR215 215Hp आधिकारिक मोटर ग्रेडर बिक्रीको लागि GR215 मोटर ग्रेडर १. CUMMINS 6CTA8.3-C215 टर्बोचार्ज्ड डीजल इञ्जिन प्रयोग गर्दै, आउटपुट टोक़ र पावर रिजर्व कारक ठूलो छ, र ईन्धन खपत कम छ। २.The गियरबक्स र टोक़ कन्भर्टर इलेक्ट्रोनिक तवरले नियन्त्रण पावर...
ECO2इन्जिनको साथ XCMG150hp मोटर ग्रेडर GR215 मोटर ग्रेडर १. CUMMINS 6CTA8.3-C215 टर्बोचार्ज्ड डीजल इञ्जिन प्रयोग गर्दै, आउटपुट टोक़ र पावर रिजर्व कारक ठूलो छ, र ईन्धन खपत कम छ। २.The गियरबक्स र टोक़ कन्भर्टर इलेक्ट्रोनिक तवरले नियन्त्रण पावर...
GR215 मोटर ग्रेडर १. CUMMINS 6CTA8.3-C215 टर्बोचार्ज्ड डीजल इञ्जिन प्रयोग गर्दै, आउटपुट टोक़ र पावर रिजर्व कारक ठूलो छ, र ईन्धन खपत कम छ। २.The गियरबक्स र टोक़ कन्भर्टर इलेक्ट्रोनिक तवरले नियन्त्रण पावर शिफ्टिंग र निश्चित शाफ्ट गियरबक्स छन्। टोक़...
GR215 कडा संरचना संग मोटर ग्रेडर GR215 मोटर ग्रेडर १. CUMMINS 6CTA8.3-C215 टर्बोचार्ज्ड डीजल इञ्जिन प्रयोग गर्दै, आउटपुट टोक़ र पावर रिजर्व कारक ठूलो छ, र ईन्धन खपत कम छ। २.The गियरबक्स र टोक़ कन्भर्टर इलेक्ट्रोनिक तवरले नियन्त्रण पावर शिफ्टिंग र...
XCMG GR215 मोटर ग्रेडर, तपाईंको उत्तम विकल्प। उत्पादन विवरण (मोटर ग्रेडर) ग्रिडको जीआर सीरीज मुख्य रूप देखि सडक सतह को स्तर, डच खुदाई, ढलान स्तर, बुल्डोजोजिङ, स्किमेशन र सडक, हवाईअड्डा र खेती मा हटाउने बर्फ को संचालन मा प्रयोग गरिन्छ। मोटर ग्रेडर...
XCMG GR215 मोटर ग्रेडर, तपाईंको उत्तम विकल्प। उत्पादन विवरण (मोटर ग्रेडर) नयाँ उपस्थिति डिजाइन। अभिव्यक्ति फ्रेम को लागी र अगाडी को पहिया को स्टीयरिंग संग मिलाइयो, सानो मोड रेडियस, गतिशीलता र लचीला संग। विद्युत-हाइड्रोलिकले पावर पारी गियरबक्सलाई...
XCMG GR215 मोटर ग्रेडर, तपाईंको उत्तम विकल्प। उत्पादन विवरण (मोटर ग्रेडर) XCMG प्रसिद्ध GR215 मोटर ग्रेडर सानो 215 एचपी मोटर ग्रेडर मुख्य विशेषता: ब्रेक सिस्टमभरी यात्रा ब्रेक सिस्टम रक्स्रोथ (जर्मनी) को हाइड्रोलिक घटक लाई स्वीकार गर्दछ। हाइड्रोलिक...
बिक्री को लागि XCMG GR215 मध्यम आकार मोटर ग्रेडर
बिक्री को लागि XCMG GR215 मोटर ग्राइडर रोड निर्माण XCMG जीआर सीरीज मोटर ग्रिडरहरु मुख्य रूप मा ग्राउंड स्तर, canalling, ढलान स्क्रैपिंग, भूनशीलता, स्किनिशन या सडक, हवाईफील्ड, खेती मा बर्फ हटाउने कार्य मा उपयोग गरिन्छ, उनि राष्ट्रीय रक्षा...
सम्बन्धित उत्पाद सूची XCMG GR215 मोटर ग्रेडर , XCMG GR215 , GR215 मोटर ग्रेडर , XCMG 210HP ग्रेडर , XCMG GR165 मोटर ग्रेडर